RASMI: Lorenzo Pellegrini oo ku biiray kooxda AS Roma + Sawirro – Gool FM
RASMI: Lorenzo Pellegrini oo ku biiray kooxda AS Roma + Sawirro
(Roma) 30 Juunyo 2017 – Kooxda AS Roma ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay dib u iibsatey Lorenzo Pellegrini oo ay kasoo qaateen Sassuolo oo ay €10m ka siisteen iyadoo Federico Ricci siiyay kooxda Neroverdi. “Waa dareen aan caadi ahayn.”
Labadan laacib ayaa kusoo barbaaray da’yarta Giallorossi balse waxay waqti kusoo qaateen gegada Mapei Stadium.
Pellegrini, sidii lasii ogaaba, wuxuu soo raacay macallinkiisa Eusebio Di Francesco oo haatan loo dhiibey kooxda Stadio Olimpico waxayna Roma laacibkan kusoo qaadatay sharuud horay qandaraaskiisa ula socotey oo Roma xaq u siinaysay inay dib u iibsan karto laacibkan khadka dhexe oo 2 sano kahor ka tegey.
“Dib ugusoo laabashada Trigoria waa dareen aan caadi ahayn, waxayna ahayd ujeedayda tan iyo intii aan aadey Sassuolo,” ayuu yiri 21-jirkan oo la hadlayay Roma TV kaddib markii uu saxiixay qandaraas soconaya ilaa Juun 2022.
GOOGOOSKA: Germany U21 vs Spain U21 1-0 (Jarmankaa oo hantay koobka Da'yarta Yurub)